စွဲချက်၏ neurobiology (2013) - သင်၏ ဦး နှောက် On Porn ကိုနားလည်ရန်အာရုံကြောသိမြင်မှုချဉ်းကပ်မှု
စွဲလမ်း၏ neurobiology နားလည်သဘောပေါက်ရန် neurocognitive ချဉ်းကပ်မှု (2013)
Curr ထင်မြင်ချက် Neurobiol ။ စာရေးသူစာမူ၊ PMC 2014 သြဂုတ် 1 ရရှိနိုင်ပါ။
Curr ထင်မြင်ချက် Neurobiol ။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ 2013 (23): 4-632 ။
2013 ဖေဖော်ဝါရီ 8 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1016 / j.conb.2013.01.018
Xavier Noël,a Damien Brevers,b နှင့် Antoine Becharab
ထုတ်ဝေသူ၏နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ထားသောဤဆောင်းပါးတွင်ရရှိနိုင်ပါသည် Curr Opin Neurobiol
မကြာသေးမီကမူးယစ်ဆေးဝါးစွဲခြင်း (ဥပမာ၊ ကိုကင်း) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သော (ဥပမာ၊ လောင်းကစားခြင်း) သည်ဤအပြုအမူများသည်သီးခြားဖြစ်သော်လည်းအပြန်အလှန်အာရုံစိုက်သည့်အာရုံကြောစနစ်သုံးခုအကြားမညီမမျှဖြစ်ခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်အဆိုပြုထားသည်။ (က) စိတ်မရှည်နိုင်၊ striatum မှီခို, အာရုံကြောစနစ်, အလိုအလျှောက်, လေ့နှင့်အဓိကအပြုအမူတွေကိုအားပေးအားမြှောက်; (ခ) ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်း၊ အဓိကအားဖြင့် prefrontal cortex မှီခိုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအတွက်အာရုံကြောစနစ်၊ အပြုအမူတစ်ခု၏အနာဂတ်အကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်တားဆီးထိန်းချုပ်ခြင်း၊ (ဂ) ကြားဖြတ်ယူမှုပြည်နယ်များကိုသတိထားခံစားချက်များနှင့်မသေချာမရေရာသောအန္တရာယ်များနှင့်ဆုလာဘ်များတွင်ပါ ၀ င်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၌ပေါင်းစပ်ထားသည့် insula။ ဤစနစ်များသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းညံ့ဖျင်းခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာဆုံးဖြတ်ချက်ရွေးချယ်မှု၏ကာလတိုအကျိုးဆက်များကို ဦး စားပေးခြင်း) ကိုပိုမိုစွဲလမ်းစေသည့်အန္တရာယ်နှင့်ထပ်မံဖြစ်ပွားခြင်းသို့ ဦး တည်စေသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ဤစနစ်သုံးမျိုး၏အာရုံကြောစွဲပုံစံအတွက်အာရုံကြောဆိုင်ရာအထောက်အထားကိုပေးသည်။
လူတစ် ဦး တစ်ယောက်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုသို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုအပြုအမူများထိန်းချုပ်မှုကိုဆုံးရှုံးသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များ (ဥပမာ၊ ဘဏ္problemsာရေးပြproblemsနာများ) သည်လိုအပ်သောအမူအကျင့်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ (ဥပမာ - အရက်သောက်ခြင်း၊1] ။ အားနည်းချက်ယန္တရားများနှင့် / သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုကြောင့်ဤ 'inflexibility' သည်ယိုယွင်းနေသော 'အခြေခံ' အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းချို့ယွင်းမှုများကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လက်တွေ့နှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့်နှစ်ခုလုံးပေါင်းစပ်ထားသည့်စွဲလမ်းမှုအမြင်ကိုပေါင်းစပ်နိုင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုသည်ရေရှည်တွင်ရွေးချယ်မည့်စွမ်းရည်ကိုရည်ညွှန်းသည့်ရေရှည်စွမ်းအားအတွက်ပျက်စီးနေသောအာရုံကြောစနစ်များနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုဤနေရာတွင်တင်ပြသည် ရလဒ်များ။ ဤနှောင့်ယှက်မှုသည်မည်သည့်အရာသို့မဟုတ်မည်သည့်အဓိကအာရုံကြောစနစ်များတွင်မဆိုဖြစ်ပွားနိုင်သည် - (က) အလိုအလျောက်နှင့်ပုံမှန်လုပ်ရပ်များကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုသော hyperactive impulsive, amygdala-striatum မှီခိုသည့်အာရုံကြောစနစ်၊ နှင့် (ခ) hypoactive ရောင်ပြန်, prefrontal cortex မှီခို, ဆုံးဖြတ်ချက်ချဘို့အာရုံကြောစနစ်, အပြုအမူ၏အနာဂတ်အကျိုးဆက်များကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း, တားစီးထိန်းချုပ်မှုနှင့် Self- အသိအမြင်; (ဂ) insula-mediated အာရုံကြောစနစ်၊ အောက်ခြေမှအထက်သို့လွှဲပြောင်းယူသောအချက်များအားပုဂ္ဂလဒိinto္ output (ဥပမာ craving) အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသော Impulsive system ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပိုမိုအားကောင်းစေပြီး၊ အဆိုပါရောင်ပြန်စနစ်၏ပုံမှန်စစ်ဆင်ရေးအတွက်လိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ လုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်တွင်ထကြွလွယ်သောနှင့်ရောင်ပြန်အာရုံကြောစနစ်များ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည် dual-processing account များကိုထင်ဟပ်ပြသည်။ တ ဦး တည်းအစာရှောင်, အလိုအလျောက်နှင့်သတိလစ်နှင့်အခြားနှေးကွေး, တမင်နှင့်သတိ [2,3,4] ။ insula ကို homeostatic ထင်သည်တုန်လှုပ်မှုတည်းကိုတုံ့ပြန်သော 'gate' system ဟုရှုမြင်သည်။5] နှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့် dual- စနစ်များ၏လှုပ်ရှားမှုများ modulate  ။ ဤဆောင်းပါး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာစွဲလမ်းမှုတွင်ရွေးချယ်မှု၏အဓိကအခန်းကဏ္highlightကိုမီးမောင်းထိုးပြရန်နှင့်စွဲလမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောသုတေသနလိုင်းများကိုအတူတကွပေါင်းစပ်ထားသောကျယ်ပြန့်သည့်အယူအဆမူဘောင်ကိုတင်ပြရန်ဖြစ်သည်။
စွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တွင်ဆက်စပ်သောအပြုအမူများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ဆိုင်သော (သို့မဟုတ်လောင်းကစားခြင်း) လုပ်ရပ်များနှင့်တပ်မက်မှုကိုအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်ရန်ပိုင်ဆိုင်မှုကို Pavlovian နှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများမှတစ်ဆင့်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုတဖြည်းဖြည်းထိန်းချုပ်လာသည်။7,8] ။ ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ရှိသောအရည်အချင်းပြည့်မီသော (ဥပမာအားဖြင့်အကျိုးသက်ရောက်ခြင်း၊ ဘီယာတစ်ပုလင်း) ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဤအမြန်နှင့်ညံ့ဖျင်းစွာစဉ်းစားထားသောတုံ့ပြန်မှုများသည် Basal ganglia နှင့်၎င်းတို့၏ cortical သွင်းအားစုများပေါ်တွင်များစွာမှီခိုသည်။9] ။ အရေးကြီးသည်မှာ amygdala-striatal (dopamine မှီခိုသော) အာရုံကြောစနစ်သည်သဘာဝမဟုတ်သည့်အကျိုးကျေးဇူးများ (ဥပမာ - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးဝါးများ) နှင့်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများ (ဥပမာ - အစားအစာ) ၏လှုံ့ဆော်မှုအကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အဓိကဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။10] ။ စိတ်လှုံ့ဆော်မှုမလိုအပ်သည့်ဤလှုံ့ဆော်မှုသည်တင်းကျပ်။ အလိုအလျောက်အလေ့အထဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်စနစ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။11], မော်တာနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးခွင့်ပြုခြင်းနှင့်လွယ်ကူချောမွေ့အတွက်ဆုလာဘ်အချက်ပြနှင့် dopamine အဆင့်ဆင့်၏ tonic function ကိုအတွက် dopamine လှုပ်ရှားမှုများ၏ phasic ဝိသေသလက္ခဏာများပြောင်းလဲမှုမှတဆင့်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများကပြုပြင်သည် [12,13] ။ အလွဲသုံးစားမှု၏မူးယစ်ဆေးဝါးများဖြင့်လှုံ့ဆော် mesolimbic dopamine လှုပ်ရှားမှုပိုမိုများပြားလာခြင်း၊14,15,16] ။ ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်မှုနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာအေးစက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များမှတဆင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာ (ဥပမာ - ကိုကင်းရရှိရန်လီဗာကိုဖိထားသည့်ကြွက်) သည်ရည်မှန်းချက်ကို ဦး တည်သည့်လုပ်ဆောင်မှု - ရလဒ်အသင်းအဖွဲ့များမှအလွယ်တကူပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။ ရည်မှန်းချက်၏လက်ရှိတန်ဖိုး  ထို့ကြောင့် compulsivity တစ်ပြည်နယ်အရိပ်လက္ခဏာ  ။ ရည်မှန်းချက် - ညွှန်ကြားခြင်းနှင့် compulsive အပြုအမူများအကြားအကူးအပြောင်းနှစ် ဦး စလုံး dorsal အတွက် synaptic ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပလပ်စတစ်၏တိကျသောရှုထောင့်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် [19,20 ••,21] နှင့် ventral ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဒေသများ [20 ••] နှင့်ဤဖြစ်စဉ်ကို dopaminergic system များ၏ sensitization အားဖြင့်အရှိန်မြှင့်သည်။22] ။ သိမြင်မှုဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲအဆင့်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုကိုဆက်လက်အသုံးပြုခြင်းသည်သွယ်ဝိုက်သော 'လိုချင်သော' လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်နွယ်သောအမှတ်တရများကိုပိုမိုအားကောင်းစေသည်။16], စွဲ -related တွေကိုအဓိကအဖြစ်အလံနှင့်စွဲသူများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းဆုပ်နေကြသည် 23] နှင့်အလိုအလျှောက်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားတွေကိုထုတ်လုပ်  ။ ဤရွေ့ကားသိမြင်မှုရှုထောင့်အဆိုပါ Incentive sensitization သီအိုရီနှင့်အတူဆိုနိုင်ပါတယ် [8,24] အကြံပြုချက်အတွေ့အကြုံများကိုထပ်တလဲလဲလုပ်ခြင်းအားဖြင့်စွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာဝတ္ထုများကို 'လိုချင်' သည်၊ လိုချင်သောအရာနှင့်၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုမျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်းအတာသည်၎င်းတို့နှစ်သက်သောအတိုင်းအတာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အချိုးမညီမျှမှုတိုးပွားလာသည်ဟုအကြံပြုထားသည်] စိတ်ဓာတ်ပြောင်းလဲခြင်း) နှင့်ဤအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်စွဲလမ်းမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူတဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာနိုင်သည်။8,24] ။ မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည့်ဆေးများကိုအထူးသိသာထင်ရှားစေခြင်းအပြင်စွဲလမ်းမှုသည်သဘာဝအကျိုးကျေးဇူးများကိုထိခိုက်လွယ်မှုအားဖြင့်လျော့နည်းစေသည်။25,26 ••] ဥပမာအားဖြင့်ကိုကင်းအလွဲသုံးစားမှုတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းကိုကင်းနှင့်မသက်ဆိုင်သောဆုလာဘ်များသည်ပုံမှန် mesocorticolimbic အာရုံကြောလှုပ်ရှားမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။27] ။ အတူတူယူ, ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေမှု၏အလိုအလျောက်စိတ်ခွန်အားနိုးခြင်းနှင့်အမူအကျင့်ရှုထောင့်အတွက် striatum / amygdala ရှုပ်ထွေးသောမှအလုပ်လုပ်တဲ့အခန်းကဏ္ as ဖော်ပြသည်။
အနည်းဆုံးဆုလိုချင်သောဆန္ဒရှိလိုသောအစိတ်အပိုင်းကိုထုတ်လုပ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သောအလေ့အထ (သို့မဟုတ်ထကြွလွယ်သောစနစ်) သည်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူများနှင့်ဆက်စပ်သောအရေးကြီးသောအပြုအမူများအကြောင်းကိုရှင်းပြနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်မည်သို့ထိန်းချုပ်သည်ကိုမရှင်းပြကြောင်းရှင်းနေပါသည် သူသို့မဟုတ်သူမ၏အပြုအမူ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ဤအခြေခံကျသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်ရေရှည်ရည်မှန်းချက်များကိုပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လိုက်စားရန်ခွင့်ပြုရန်လိုအပ်သော 'ထင်ဟပ်သောစနစ်' ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုရည်ညွှန်းသည်။
ရောင်ပြန်စနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုသည်အာရုံကြောစနစ် ၂ ခု၏သမာဓိအပေါ်မူတည်သည်။28] ပုံမှန်အားဖြင့်လည်ပတ်နေသည့် ဦး နှောက်တွင် 'cool' အား 'hot' functions များနှင့်ခွဲခြားရန်အလွန်ခက်ခဲပြီးဤခွဲထုတ်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကအဆုံးရလဒ်သည် ventromedial prefrontal cortex ပျက်စီးခြင်း (သို့) စိတ်ပညာ / လူမှုရေးနှင့်ဆက်စပ်သည့်အပြုအမူတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြုအမူ  ။ 'Cool' ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှစ် ဦး နှစ်ဖက်ညံ့ညံ့။ dorsolateral frontostriatal နှင့် frontoparietal networks များမှကမကထပြုပေးသည်။30] နှင့်သက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် ('Updating') ကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်မွမ်းမံခြင်း၊ ကြိုတင်ကြံစည်ခြင်း (တားစီးမှု) ၏တားစီးခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစုအဝေးပြောင်းခြင်း ('shifting') စသည့်အခြေခံအလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်မှုများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ]31] ။ 'Hot' အလုပ်၏လုပ်ဆောင်မှုများသည် paralimbic orbitomedial နှင့် ventromedial frontolimbic ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတို့မှအချက်အလက်များ၊ အမှတ်တရများ၊ အသိပညာနှင့်သိမှတ်မှုတို့မှတစ်ဆင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ပconflictိပက္ခဖြစ်နေသောသက်ရောက်မှု / စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုတက်ကြွစေရန်ခွင့်ပြုသည်။ နောက်ဆုံးရလဒ်မှာအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်သောသို့မဟုတ်အနှုတ်လက္ခဏာအချက်ပြမှုဖြစ်ပေါ်လာသည်32] ။ ထို့ကြောင့်လုံလောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်သိမြင်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ 'အေးမြ' အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ) နှင့်ထိရောက်သော (ဆိုလိုသည်မှာ 'ပူပြင်းသော' အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာ) စနစ်များကိုပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်ရေရှည်ဆုံးရှုံးမှုများသို့မဟုတ်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရလဒ်များအပေါ်ရေတိုအကျိုးအမြတ်များတွက်ချက်ခြင်းစွမ်းရည်ကိုထင်ဟပ်စေသည်။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခု .
'ရောင်ပြန်' သော prefrontal cortex ရှိလုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ပြတ်တောက်သွားသောကြောင့်တုန့်ပြန်မှုတားဆီးမှုနှင့်ဆေးစွဲမှုတွင်ပုံမှန်မဟုတ်သောထူးခြားမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မူးယစ်ဆေးဝါးရှာဖွေခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအားဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမဟုတ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုဖြစ်စေသည်ကိုရှင်းပြသည်။1] ။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းအားဖြင့်34], 'အေးမြ' အလုပ်အမှုဆောင်သည်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်လောင်းကစားစွဲသူများအားအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။35] ကိုကင်းမှရှောင်ကြဉ်ခြင်းကိုလျှော့ချခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းမှုနှုန်းကိုအရှိန်မြှင့်မည်ဟုထင်ရသည်  လောင်းကစား  နီကိုတင်း  အရက်  နှင့်ပြgambနာလောင်းကစားခြင်းကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည် [40 •] နှင့်ကုသမှုမှ attrition တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်  ။ စွဲလမ်းနေသည့် 'ပူသော' အမှုဆောင်လုပ်ငန်းစဉ်များ၏သက်ရောက်မှုကိုအစပိုင်းတွင်ရှေ့တည့်တည့်ရှိဒေသများတွင်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိသောလူနာများနှင့်လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုများတွင်ဤလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုစီ၏အာရုံကြောအခြေခံကိုဖော်ပြသည့်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများကိုအစပိုင်းတွင်သရုပ်ပြခဲ့သည်။32,42] ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏ ventromedial ဒေသပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်, ယခင်ကကောင်းမွန်စွာအဆင်ပြေအောင်တစ် ဦး ချင်းစီလူမှုရေးစည်းဝေးကြီးများကိုစောငျ့ရှောကျနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ်အကျိုးရှိရှိဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်လာ  ။ ဤလိုငွေပြမှု၏သဘောသဘာဝအရ vmPFC ဒေသသည် (က) အဆင့်မြင့်အသင်းအဖွဲ့ကော်သိုက်ရှိ (ခ) effector ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုဖြစ်ပေါ်စေသောအဖြစ်အပျက်များအကြားဆက်စပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။42] ။ စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ဉာဏ်ကိုသက်ရောက်စေသောစနစ်များကိုပျက်စီးစေခြင်းသည်အကျိုးရှိရှိဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုထိခိုက်စေသည်43] ။ အိုင်အိုဝါလောင်းကစားခြင်းအလုပ် (IGT) [44အစစ်အမှန်ဘဝရှိအာရုံကြောလူနာများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းချို့ယွင်းချက်များကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်အစပိုင်းတွင်တီထွင်ခဲ့သည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကလွှမ်းမိုးနေသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ကဏ္intoများကိုထိတွေ့ရန်ပြသခဲ့သည် 42] ။ IGT သည်ပြictionsနာမဟုတ်သောထိန်းချုပ်သည့်အဖွဲ့များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကစွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးရှိသောလူများတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းခြင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသည်။45] ။ ဥပမာအားဖြင့်အချို့သောမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များတွင် IGT မှသက်သေပြသည့်ညံ့ဖျင်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်အရက်သုံးစွဲခြင်းပြproblemsနာများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။46].
လှုံ့ဆော်မှုကိုအရှိန်မြှင့ ်၍ အပြုအမူအားထိန်းချုပ်မှုအားနည်းစေသည့်အာရုံကြောစနစ်များ - Insula
အဆိုပါ insular cortex မကြာသေးမီကပုဂ္ဂလဒိive္စိတ်ခံစားမှုခံစားချက်များကိုများအတွက်အလွန်အရေးပါသည့် interoceptive ကိုယ်စားပြုမှု၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ plays သောသောအဓိကအာရုံကြောဖွဲ့စည်းပုံအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်5,6,47] ။ ထို့အပြင်မကြာသေးမီကပင် insular cortex သည်အပြန်အလှန်လက်ခံသောအချက်ပြမှုကိုအလိုရှိသည်၊ မျှော်လင့်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်တွန်းအားဟုခံစားရသည့်အရာသို့ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သည်ဟုစောဒကတက်ခဲ့သည်။6,48 ••] ။ ပုံရိပ်လေ့လာမှုများသည်ဆေးကြောခြင်း၊ ကိုကင်း၊ အရက်နှင့်ဘိန်းဖြူတို့အတွက်ဘာသာရပ်များ၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည့်အင်ဆူလာအတွင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်သေပြခဲ့သည်။5,6,48 ••] ။ အထီးကျန်မှုကိုပျက်စီးစေသောလေဖြတ်ခြင်းများသည်စာသားအရစီးကရက်ဆေးလိပ်စွဲသူများအားဆေးလိပ်သောက်ရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြစ်သည်။49] ။ ဒီလေ့လာမှုမှာအင်ဆူလာနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာအူလာကိုမပါ ၀ င်တဲ့ ဦး နှောက်ပျက်စီးမှုနဲ့ဆေးလိပ်သောက်သူတွေဟာ 'ဆေးလိပ်စွဲတာကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတာ' ထက်အဆ ၁၀၀ ပိုများပါတယ်။ ဒါကဆေးလိပ်ကိုအလွယ်တကူနဲ့ချက်ချင်းဆေးလိပ်ဖြတ်နိုင်ခြင်း၊ နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ဖို့တိုက်တွန်း၏ဇွဲမပါဘဲ  ။ ဤရလဒ်သည်ဆေးစွဲမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်အင်ဆူလာပါဝင်သောယန္တရားတစ်ခုအားသဘောတရားသစ်တစ်ခုအဖြစ်မြင်စေသည် ပုံ 1).
စွဲ၌သော့ခတ်အာရုံကြောစနစ်သုံးခုအတွက်အဆိုပြုထားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသရုပ်ဖော်သည့်သိထားသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာပုံစံ။ (၁) ကျွန်ုပ်တို့သည် "ထကြွလွယ်သောစနစ်" ဟုကျွန်ုပ်တို့ခေါ်ဝေါ်ကြသည့်မစ်ဂဒလာ - ကိုယ်ဝန်ဆောင်အာရုံကြောစနစ်သည်ရိုးရာအကျိုးခံစားခွင့်စနစ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေသည်။ ...
အဆိုပါ insular cortex (နှင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိသည့် anterior insula) (homeostatic မညီမျှမှု, ဆင်းရဲချို့တဲ့မှုပြည်နယ်, စိတ်ဖိစီးမှု, အိပ်စက်ခြင်းချို့တဲ့မှုကြောင့်) interoceptive အချက်ပြမှုများကိုတုံ့ပြန်။ ဤရွေ့ကား interceptive အချက်ပြမှုများကို 'urge' သို့မဟုတ် 'တဏှာ' ၏ခံစားချက်အဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိexperienced္အတွေ့အကြုံရဖြစ်လာနိုင်သောအရာသို့ဘာသာပြန်ထားသောအပြင်ကျနော်တို့ Insular cortex လှုပ်ရှားမှုဆေးလိပ်သောက် (သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုယူသို့မဟုတ်လောင်းကစားဝိုင်းဖို့) ကိုလှုံ့ဆျောမှုနှင့်လှုံ့ဆျောတိုးမြှင့်ကြောင်းယူဆချက် (က) အလေ့အထ / ထကြွလွယ်သောစနစ်၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအသိသာပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းဖြင့်၊ နှင့် (ခ) စီးကရက်သို့မဟုတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများရှာဖွေရန်နှင့်ဝယ်ယူရန်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်များကိုရေးဆွဲရန်လိုအပ်သောအာရုံစိုက်ခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် PFC ၏ယန္တရားများကိုဖြိုဖျက်ခြင်းဖြင့်။50 •] ။ ကွဲပြားခြားနားစွာပြောရမည်ဆိုလျှင်၊ ဤ interoceptive ကိုယ်စားပြုမှုများသည်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဆေးလိပ်သောက်ခြင်း (သို့) အသုံးပြုခြင်း၏သွေးဆောင်မှုကိုတားဆီးရန် (ထိန်းချုပ်မှု / ရောင်ပြန်မှု) စနစ်၏လှုပ်ရှားမှုကိုတားဆီးခြင်းဖြင့်တားဆီးထိန်းချုပ်မှုအားဖြည့်ရန်အတွက်လိုအပ်သောသိမြင်မှုအရင်းအမြစ်များကို 'သိမ်းယူ' နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ဒီယူဆချက်ကိုထောက်ခံဖို့ပင်ကိုယ်မူလသက်သေအထောက်အထားတွေလိုအပ်နေသေးပေမယ့်ဒီရှုထောင့်ကိုထောက်ခံတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဦး နှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှုများစွာရှိပါတယ်။ ပထမ ဦး စွာ anterior insula သည်အခြားသူများအကြား amygdala, ventral striatum နှင့် orbito-frontal cortex နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးအချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်များ (ဥပမာ - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု) တို့နှင့်သက်ဆိုင်သော homeostatic မညီမျှမှု (ဥပမာ - စိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်စိတ်ဖိစီးမှု) တို့သည် interoceptive အချက်ပြမှုများကိုပေးပို့သည်ဟုဆိုသည်။ အလှည့်၌အခြားအာရုံကြောစနစ်များအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုသော insula ကလက်ခံရရှိ  ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်အချို့လေ့လာမှုများအရမူးယစ်ဆေးဝါးသည် ဦး နှောက်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော frontal-parietal နှင့် cingulate-opercular ကွန်ယက်များကိုပိတ်ခြင်းဖြင့်အထက်မှထိန်းချုပ်မှုကိုနှောင့်ယှက်စေသည်။52 •], ငါတို့သည်လည်းရောင်ပြန်စနစ်အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ရာ၏အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်ကြသည်။ ထို့အပြင်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်မက်ဆီလူးလူးဇင့်ကိုထည့်သွင်းခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်ဒေသများ၌ ဦး နှောက်ကိုပိုမိုတက်ကြွစေနိုင်ခြင်း (mesial orbito-front cortex နှင့် ventral striatum ၏နောက်ဘက်ဒေသများ) နှင့် impulsive system ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် ventral striatum တို့ကိုထုတ်ယူသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လှုံ့ဆော်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် prefrontal cortex နှင့် precuneus (ကျွန်ုပ်တို့ရောင်ပြန်ဟပ်မှုစနစ်၏အစိတ်အပိုင်းများဖြစ်သော)  ။ သို့သော်ဤလှုပ်ရှားမှုသည်တပ်မက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲရန်တိုက်တွန်းခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုရှိလား၊54] ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုခံစားနေရပြီးတစ် ဦး ချင်းစီ  ထပ်ခါတလဲလဲတပ်မက်ခြင်း၏ထပ်ခါတလဲလဲဖြစ်စဉ်များသည် corticostriatal ဆားကစ်များ (ဥပမာအားဖြင့်ဆက်နွယ် corticostriatal ဆားကစ်များကျုံ့ခြင်းနှင့် sensorimotor striatum မှတစ်ဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသောဆားကစ်များ၏ hypertrophy) ကိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအားလုံးသည်အင်ဆူလာ၏အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်မှုအာရုံကြောစနစ်များနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုဆိုင်ရာကျွန်ုပ်တို့၏အဆိုပြုထားသောယန္တရားကိုပဏာမထောက်ခံမှုပေးသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူနောက်ထပ်ပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများလိုအပ်နေသေးသည်။ ဤသုတေသနသည်စွဲစွဲသူများအားဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းညံ့ဖျင်းမှုကိုနားလည်ရန်အလားအလာကောင်းသည့်နည်းလမ်းသစ်တစ်ခုပေးသင့်သည်။
လတ်တလောသီအိုရီဆိုင်ရာအကောင့်များ [26 ••,56] interoceptive စနစ်၏အလုပ်မဖြစ်မှုသည်မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိမှုကိုဟန့်တားနိုင်သည့်အတွက်ရောဂါတစ်ခုကိုအသိအမှတ်ပြုရန်ပျက်ကွက်ခြင်း (ဆိုလိုသည်မှာထိုးထွင်းသိမြင်မှုမရှိခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည်။ အမှန်စင်စစ်ကုသမှုခံယူရန်လိုအပ်မှုသည်စွဲလမ်းမှုခံစားနေရသောလူနည်းစုလူနည်းစုသာဖြစ်သည်။57] သည်၎င်းသည်သိမြင်မှုဖြစ်စဉ်များနှင့်မိမိကိုယ်ကိုသတိပြုမိသည့်အာရုံကြောဆိုင်ရာအာရုံကြောများအတွင်းရှိကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုထင်ဟပ်စေနိုင်သည်။56] ။ စွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်မှုကိုလျှော့တွက်ခြင်းသည်ဤလူများ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကိုတွန်းအားဖြစ်စေနိုင်သည်။ ချို့ယွင်းချက်ရှိသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုစွမ်းရည်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ metacognition စွမ်းရည်ကိုအကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မမှန်ကန်သောစွမ်းဆောင်ရည်မှမှန်ကန်သောခွဲခြားသိမြင်နိုင်စွမ်းဖြစ်သည်။ ကိုကာကိုလာသုံးစွဲသူများတွင်မိမိကိုယ်ကိုအမြင်နှင့်စွဲလမ်းစေသောအမှန်တကယ်အပြုအမူများအကြားကွဲလွဲမှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။26 ••,58] အရက်နှင့်အတူတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်59] နီကိုတင်းမှီခိုမှုနှင့်အတူ 60] မက်သာဖီတမင်းဆေးမှီခိုသောဘာသာရပ်များတွင် 61] နှင့်လူငယ်ဆေးခြောက်ချိုးဖောက်သူများ  ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းများတွင်သာမက63 •] နှင့်၎င်းသည်အရက်ကိုရှောင်ခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့်အရက်မှရှောင်ကြဉ်နိုင်သည့်စွမ်းရည်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် 64] ။ စွဲလမ်းနေသူများ၌ 'ပုံမှန်' နှင့် 'meta' အဆင့်အကြားတွေ့ရှိရသောပုံမှန်မဟုတ်သောဒီဂရီကွဲပြားမှုသည် metacognition ညံ့ဖျင်းခြင်းကြောင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအားစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။65] ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ rostral နှင့် dorsal prefrontal cortex အာရုံကြောစနစ်များသည်တိကျမှန်ကန်သောဆုံးဖြတ်ချက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ မှတ်ဉာဏ်အပြင်လူတစ် ဦး ၏သိမြင်နားလည်မှုကိုပိုမိုသိမြင်စေရန်ထိန်းချုပ်မှုကိုပိုမိုမြှင့်တင်နိုင်ရန်အတွက်များစွာလုပ်ဆောင်ရန်ကျန်ရှိနေသေးသည်။ ကျန်းမာသောသင်တန်းသားများကို66] နှင့်စွဲလမ်းအတွက် [26 ••] ။ ခန္ဓာဗေဒအရ, insula interoceptive အချက်ပြမှုများကိုလက်ခံရရှိများအတွက်အဓိက site တစ်ခုဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အလှည့်အတွက် insula prefrontal cortex ၏ကျယ်ပြန့်ဒေသများနှင့်ချိတ်ဆက်နှင့်ဤအရပ်မှဒီ interoceptive-prefrontal အပြန်အလှန် insula ကကမကထပြုခဲ့နိုင်ပါသည်26 ••,67].
အထူးသဖြင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတွင်အင်ဆူလာ၏အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ofကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းသည်စွဲလမ်းမှု၌ပါ ၀ င်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာအခြားသောအစိတ်အပိုင်းများ၏အခန်းကဏ္ on နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့် impulse control disorders (အထူးသဖြင့် mesolimbic dopamine system) ကိုမထိခိုက်စေပါ။ အလေ့အထစနစ်) နှင့် prefrontal cortex (အလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်) ။ အင်ဆူလာ၏အခန်းကဏ္Addressကိုဖြေရှင်းခြင်းသည်ဤကြိုတင်ဆောင်ရွက်မှုကိုသာဖြည့်စွက်နိုင်ပြီးစွဲလမ်းမှုသံသရာကိုချိုးဖောက်ခြင်းအပါအ ၀ င်ဒေါသတကြီးထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာရောဂါများစွာကိုကုသရန်အတွက်အသစ်သောကုသနည်းဆိုင်ရာနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေရန်ကျွန်ုပ်တို့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကိုတိုးတက်စေသည်။ အထင်ရှားဆုံးမှာအင်ဆူလာ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုကုထုံးဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းသည်မိမိ၏စွဲလမ်းမှုနှင့်အခြားလှုံ့ဆော်မှုထိန်းချုပ်သည့်ပြproblemsနာများကိုကျော်လွှားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေခြင်းဖြစ်သည်။48 ••,68] ။ ၎င်းသည်အင်ဆူလာအတွင်းရှိ receptors များကိုပစ်မှတ်ထားသောဆေးဝါးဗေဒဆိုင်ရာကုသမှုအသစ်များ၊ ထိုကဲ့သို့သောနက်ရှိုင်းသော ဦး နှောက်ကိုနှိုးဆွခြင်းကဲ့သို့သောထိုးဖောက်နည်းစနစ်များသို့မဟုတ်ထပ်ခါတလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွခြင်းကဲ့သို့သောမထိုးဖောက်နိုင်သောနည်းစနစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းဖြင့်ပြီးမြောက်နိုင်သည်။69,70 •] ။ အခြားအဆင်ပြေလွယ်ကူသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှာခန္ဓာကိုယ်၏အသိပညာတိုးတက်စေရန်ရည်ရွယ်သည့်ကုထုံးများကိုအကောင်အထည်ဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။48 ••] ။ ဤနည်းသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းတုန့်ပြန်မှုနည်းပါးသော (သို့) ဤအချက်ပြမှုအားနည်းသော (စွဲလမ်းမှုအားနည်းသော) စွဲလမ်းသူများအတွက်အထူးအကျိုးရှိသည်။56] နှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်ရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမဟုတ်သောအရင်းအမြစ်များကိုမှီခိုနေသူ 48 ••] ဖြစ်နိုင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် insula နှင့် medial prefrontal cortex ပါဝင်သောအလုပ်မဖြစ်သောအာရုံကြောဆိုင်ရာယန္တရားကြောင့်ဖြစ်သည်။71] ။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါဝင်မှုကိုလုံလောက်သောအနက်ကိုအာရုံစိုက်သောသိမှုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနည်းစနစ်များသည်အနိမ့်ဆုံးအချက်ပြမှုနှင့်အမြင်ညံ့ဖျင်းမှုသည်စွဲလမ်းသူများအတွက်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ခန္ဓာပြည်နယ်များ၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသောကိုယ်စားပြုမှုအတွက်အကျိုးရှိစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အင်ဆူလာ / အင်တီရီယယ်လ်၊68].
အဆိုပါ striatum, prefrontal cortex နှင့် insula သောအဓိကအာရုံကြောအလွှာဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါ Insula စွဲလမ်းကုသရန်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်သော့ခန္ဓာဗေဒပစ်မှတ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောအယူအဆဆိုင်ရာမူဘောင်ကိုထောက်ခံသည့်အဓိကသုတေသနကိုမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (R01 DA023051)၊ နဗ်ကြောဆိုင်ရာနာမကျန်းမှုနှင့်လေဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျု (P50 NS19632) မှအန်တိန်ဘီချာရာအားထောက်ပံ့ခြင်းများဖြင့်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်။ R01CA152062) ဒေါက်တာ Xavier Noëlသည်ဘယ်လ်ဂျီယံသိပ္ပံရန်ပုံငွေ၏သုတေသနတွဲဖက် (FRS / FNRS) ဖြစ်သည်။ Damien Brevers သည်ဘယ်လ်ဂျီယံသိပ္ပံရန်ပုံငွေ၏သုတေသနအဖွဲ့ (FRS / FNRS) ဖြစ်သည်။
1. အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါ၏ရောဂါနှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်။ 4th Edition ကိုအမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း; 1994 ။
2. Kahneman D, Tversky A. Prospect သီအိုရီ: အန္တရာယ်အောက်မှာဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ စီးပွားရေး။ 1979; 47: 263-291 ။
3. Strack က F, Deutsch R. ရောင်ပြန်နှင့်လူမှုရေးအပြုအမူ၏ထကြွလွယ်သောဆုံးဖြတ်။ Pers Soc Pscyhol Rev 2004; 8: 220-247 ။ [PubMed]
4. အီဗန် JT ။ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၊ စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုနှင့်လူမှုရေးအသိအမှတ်ပြုခြင်းစသည့် dual-processing အကောင့်များ။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2008; 58 [PubMed]
5. Craig အေဒီ။ အခုဘယ်လိုနေလဲ အဆိုပါအတွင်းပိုင်း insula နှင့်လူ့အသိအမြင်။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2009; 10: 59-70 ။ [PubMed]
6 ။ Naqvi နယူးဟမ်းရှား, Bechara အေစွဲများ၏ဝှက်ထားကျွန်း: အ insula ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2009; 32: 56-67 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
7 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ မူးယစ်ဆေးစွဲများအတွက်အားဖြည့်များ၏အာရုံကြောစနစ်များ: လုပ်ရပ်များကနေအလေ့အထမှမလှူရန်။ နတ် neuroscience ။ 2005; 8: 1481-1489 ။ [PubMed]
8. ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: စွဲတစ်ခုမက်လုံးပေး - sensitization သီအိုရီ။ Brain Res Brain Res Rev. 1993; ၁၈: ၂၄၇-၂၉၁ ။ [PubMed]
9 ။ ဘီးလင်း: D, Jonkman S က, Dickinson တစ်ဦးက, Robbins TW, Everitt BJ ။ အဆိုပါ Basal ganglia အတွင်းစင်ပြိုင်နှင့်အပြန်အလှန်သင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ: စွဲ၏နားလည်မှုအဘို့ဆီလျော်။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2009; 199: 89-102 ။ [PubMed]
၁၀။ ပညာရှိ R. Brain ဆုအစီအစဉ်သည်ဆင်ဆာကင်းမဲ့သည့်မက်လုံးများကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း။ Neuron ။ 10; 2002: 36-229 ။ [PubMed]
11. Lucantonio L, Stalnaker TA, Shaham Y, Niv Y, Schoenbaum G. အ orbitofrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှု၏သက်ရောက်မှုကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအပေါ်သက်ရောက်မှု။ နတ်နေရာသစ်။ 2012; 15: 358-366 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
12 ။ ကွဲပြားခြားနားသောအချိန်သင်တန်းများမှာ Schultz ဒဗလျူအကွိမျမြားစှာ dopamine လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 2007; 30: 259-288 ။ [PubMed]
၁၃။ Schultz W. အာရုံကြောဆိုင်ရာဆုလာဘ်၊ အန္တရာယ်နှင့်စွဲလမ်းစေသောမူးယစ်ဆေးဝါးများအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ယန္တရားများ၏အားနည်းချက်များ။ Neuron ။ 13; 2011: 69-603 ။ [PubMed]
14. Franken IA ။ မူးယစ်ဆေးတဏှာနှင့်စွဲ: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် neuropsychopharmacological ချဉ်းကပ်ပေါင်းစပ်။ Prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2003; 27: 563-579 ။ [PubMed]
15. Franken IA, Booij J, van den Brink W. လူ့စွဲလမ်းမှုတွင် dopamine ၏အခန်းကဏ္: - ဆုလာဘ်မှလှုံ့ဆော်ခံရသောအာရုံစူးစိုက်မှုအထိ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏ဥရောပဂျာနယ်။ 2005; 526: 199-206 ။ [PubMed]
16. Stacy AW, Wiers RW သွယ်ဝိုက်သိမှတ်ခြင်းနှင့်စွဲခြင်း - ဝိရောဓိအပြုအမူကိုရှင်းပြရန်ကိရိယာတစ်ခု။ Annu ဗြာ Clin Psychol ။ 2010; 6: 551-575 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
17. Dickinson A, Balleine B, Watt A, Gonzales က F, Boakes RA ။ တိုးချဲ့ဆာပလေ့ကျင့်ရေးပြီးနောက်လှုံ့ဆျောမှုထိန်းချုပ်မှု။ Animav Behav Learn ။ 1995; 23: 197-206 ။
18 ။ Dalley JW, Everitt BJ, Robbins TW ။ Impulse, compulsive နှင့်အထက်မှအောက်သို့သိမြင်မှုထိန်းချုပ်ရေး။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2011; 69: 680-94 ။ [PubMed]
19. Grueter BA, Rothwell PE, Malenka RC ။ စွဲအတွက် synaptic plasticity နှင့် striatal circuit ကို function ကိုပေါင်းစပ်။ Curr ထင်မြင်ချက် Neurobiol ။ 2012; 22: 545-551 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
20 ။ Kasanetz က F, Deroche-Gamonet V ကို, Berson N ကို, Balado အီး, Lafourcade M က, Manzoni အို, Piazza PV ။ စွဲဆေးသို့ကူးပြောင်းခြင်းသည် synaptic plasticity တွင်စွဲမြဲပျက်စီးခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သိပ္ပံ 2010; 328: 1709-12 ။ [PubMed] ••ကိုကင်း၏ neurotoxic အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အားနည်းချက်တစ်ခုပြည်နယ်၏ကြောင့်တစ် ဦး persistent ချို့ယွင်းရေရှည်ဂီယာ၏စိတ်ကျရောဂါကြောင့်အပြုအမူကိုအစဉ်အမြဲပြောင်းလဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လိုအပ်သောအာရုံခံဆားကစ်၏သနျ့တားဆီး။
21 ။ ဘီးလင်း: D, Everitt BJ ။ အလေ့အထများကိုရှာကြံကင်းသည့် dorsal striatum အတူ ventral ချိတ်ဆက် dopamine-မှီခိုအမှတ်စဉ်ဆက်သွယ်မှုအပေါ်မူတည်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2008; 57: 432-441 ။ [PubMed]
22. Nelson A, Killcross S. Amphetamine ထိတွေ့မှုကအလေ့အထကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ J ကို Neurosci ။ 2006; 26: 3805-3812 ။ [PubMed]
23. Field M, Munafò MR, Franken IA ။ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက်အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှုနှင့်ပုဂ္ဂလဒိc္တပ်မက်မှုအကြားဆက်နွယ်မှု၏ meta-analytic စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု။ Psychol Bull ။ 2009; 135: 589-607 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
24 ။ ရော်ဘင်ဆင် TE, Berridge KC ။ စွဲလမ်း။ Annu ဗြာ Psychol ။ 2003; 54: 25-53 ။ [PubMed]
25 ။ စတိန်း RZ, Volkow ND ။ မူးယစ်ဆေးစွဲနှင့်၎င်း၏နောက်ခံ neurobiological အခြေခံ: အတိုကျရိုကျ cortex ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုအဘို့သက်သေအထောက်အထား neuroimaging ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2002; 159: 1642-1652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
26 ။ Goldstein RZ, Volkow ND ။ စွဲအတွက် prefrontal cortex ၏ကမောက်ကမဖြစ်မှု: neuroimaging တွေ့ရှိချက်များနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု။ နတ်ဗြာ Neurosci ။ 2011; 12: 652-669 ။ [PubMed] ••ဤသုံးသပ်ချက်သည်စွဲလမ်းမှုအတွက် prefrontal cortex ၏ပြတ်တောက်မှုသည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်တိုက်စားမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့်အားနည်းချက်ရှိသောအပြုအမူများအပေါ် အခြေခံ၍ အလုပ်လုပ်သော neuroimaging လေ့လာမှုများအပေါ်အဓိကထားသည်။
27. Goldstein RZ, Alia-Klein N, Tomasi: D, Zhang L, Cottone LA, Maloney T, et al ။ လျော့နည်း prefrontal cortical sensitivity ကိုအားကိုးစွဲအတွက်ချို့ယွင်းလှုံ့ဆျောမှုနှင့်ချုပ်တည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်? နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2007; 164: 43-51 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
28. Zelazo PD, ပုံမှန်နှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်Müller U. အလုပ်အမှုဆောင် function ကို။ ခုနှစ်တွင်: ဘလက်ဝဲလ် Goswami U. , အယ်ဒီတာ။ ကလေးဘဝသိမြင်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏လက်စွဲစာအုပ်။ 2002 စစ။ 445-469 ။
29. Sobhani M, Bechara A. အကျင့်ယိုယွင်းမှုနှင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုဆိုင်ရာအပြုအမူ။ Soc Neurosci ။ 2011; 6: 640-652 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
30. Kerr တစ် ဦး က, Zelazo PD ။ 'hot' အလုပ်အမှုဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု - ကလေးလောင်းကစားခြင်းလုပ်ငန်း။ ဦး နှောက် Cogn ။ 2004; 55: 148-157 ။ [PubMed]
၃၁။ Miyake A၊ Friedman NP, Emerson MJ, Witzki AH, Howerter A, Wager TD ။ ရှုပ်ထွေးသော 'Frontal Lobe' လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်မှု၏စည်းလုံးမှုနှင့်မတူကွဲပြားမှုများနှင့် ၄ င်းတို့၏ပါဝင်မှုများ - မူကွဲပြောင်းလဲနိုင်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု။ Cogn Psychol ။ 31; 2000: 41-49 ။ [PubMed]
32. Bechara A၊ Damasio H, Tranel D, Damasio AR ။ အိုင်အိုဝါလောင်းကစားခြင်းအလုပ်နှင့်သိသာထင်ရှားသောအယူအဆ - မေးခွန်းအချို့နှင့်အဖြေများ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2005; 9: 159-164 ။ [PubMed]
33. Damasio AR ။ အဆိုပါ somatic အမှတ်အသားအယူအဆနှင့် prefrontal cortex ၏ဖြစ်နိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 1996; 351: 1413-1420 ။ [PubMed]
34. Hofmann W, Schmeichel BJ, Baddeley အေဒီ။ အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2012; 16: 174-180 ။ [PubMed]
35 ။ Leeman RF, Potenza MN ။ တူညီခြင်းနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားဝိုင်းနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်အကြားကွဲပြားခြားနားမှု: Impulse နှင့် compulsive အပေါ်တစ်ဦးအာရုံ။ Psychopharmacology ။ 2012; 219: 469-490 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
36. Garavan H ကို, Hester R. ကိုကင်းမှီခိုအတွက်သိမြင်မှုထိန်းချုပ်မှု၏အခန်းကဏ္.ကို။ Neuropsychol ဗျာ 2007; 17: 337-345 ။ [PubMed]
၃၇။ Goudriaan AE၊ Oosterlaan J, De Beurs E, van Den Brink W. ၏အခန်းကဏ္ gamb သည်မိမိကိုယ်ကိုတင်ပြသည့်စိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုနှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆိုင်ရာကြိုတင်တားဆီးခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဆိုင်ရာအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံနည်းကျနှိုင်းယှဉ်မှုများအားနှိုင်းယှဉ်ပြခြင်း။ Psychol Med ။ 37; 2008: 38-41 ။ [PubMed]
38. Krishnan-Sarin S, Reynolds B, Duhig AM, Smith A, Liss T, McFetridge A, Cavallo DA, Carroll KM, Potenza MN ။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစိတ်မသက်မသာဖြစ်မှုကဆယ်ကျော်သက်ဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းရပ်တန့်ရေးအစီအစဉ်တွင်ကုသမှုရလဒ်ကိုခန့်မှန်းသည်။ မူးယစ်ဆေးအရက်ပေါ်မူတည်။ 2007; 88: 79-82 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ventromedial prefrontal cortex ကမောက်ကမဖြစ်မှုကိုအထိခိုက်မခံသောစမ်းသပ်မှုများအနေဖြင့်အရက်မှီခိုမှုအားစောစီးစွာပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့် Bowden-Jones H၊ McPhillips M၊ Rogers R, Hutton S, Joyce E. J ကို Neuropsychiatry Clin Neurosci ။ 39; 2005: 17-417 ။ [PubMed]
40 ။ Brevers D, Cleeremans A, Verburggen F, Bechara A, Kornreich C, Verbanck P, Noel X PlosOne ။ 2012 Doi: 10.1371 / journal.pone.0050647c ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] •လေ့လာမှုအရလောင်းကစားသမားမဟုတ်သူများနှင့်ပြproblemနာရှိသည့်လောင်းကစားသမားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြင်းထန်သောရောဂါဗေဒလောင်းကစားသမားများသည်တုံ့ပြန်မှုသည်သေလုနီးပါးဖြစ်သည့်အလျင်အမြန်တားစီးမှုဖြစ်သည့်အခြေအနေများအောက်တွင်သူတို့၏မော်တာတုံ့ပြန်မှုကိုမရပ်တန့်နိုင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
41 Aharonovich E, Hasin DS, Brooks AC, Liu X, Bisaga A, Nunes EV ။ သိမှုဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုသည်ကိုကင်းမှီခိုနေသည့်လူနာများတွင်ကုသမှုနည်းပါးခြင်းကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါးအရက်ကိုမှီခို။ 2006; 81: 313-322 ။ [PubMed]
ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၏အခန်းကဏ္: ။ Orbitofrontal ပျက်စီးမှုနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာလူနာများသက်သေအထောက်အထား။ ဦး နှောက် Cogn ။ 42; 2004: 55-30 ။ [PubMed]
43. Bechara A၊ Damasio H၊ Tranel: D, Damasio AR ။ အကျိုးရှိရှိမဟာဗျူဟာကိုမသိရှိမီအကျိုးရှိစွာဆုံးဖြတ်ခြင်း။ သိပ္ပံ 1997; 275: 1293-1295 ။ [PubMed]
44 ။ Bechara တစ်ဦးက, Damasio AR, Damasio H ကို, Anderson က SW ။ လူ့ prefrontal cortex ပျက်စီးမှုအောက်ပါအနာဂတ်အကျိုးဆက်များမှအာရုံမခံစားနိုင်သော။ သိမှတ်ခံစားမှု။ 1994; 50: 7-15 ။ [PubMed]
45. Verdejo-Garcia A, အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများ Bechara A. Neuropsychology Psicothema ။ 2010; 22: 227-235 ။ [PubMed]
46. ​​Xiao L၊ Bechara A၊ Grenard LJ, Stacy WA, Palmer P, Wei Y, Jia Y, Fu X, Johnson CA. တရုတ်ဆယ်ကျော်သက်အရက်သောက်ခြင်းအပြုအမူအပေါ်ထိရောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် J ကို Int Neuropsychol Soc ။ 2009; 15: 547-557 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
47. Damasio AR ။ ဦး နှောက်ကစိတ်ကိုဘယ်လိုဖန်တီးသလဲ။ သိပ္ပံပညာရှင်။ 1999; 281: 112-117 ။ [PubMed]
48 ။ Verdejo-Garcia A, Clark L, Dunn bd ။ စွဲအတွက် interoception ၏အခန်းကဏ္:ကို: တစ်ဝေဖန်ပြန်လည်သုံးသပ်။ Neurosci Biobehav ဗျာ 2012; 36: 1857-1869 ။ [PubMed] ••ဤဆောင်းပါးသည်လက်ရှိစွဲလမ်းနေသည့်အကောင့်များကိုဝေဖန်ထားသည်။
49 ။ Naqvi နယူးဟမ်းရှား, Rudrauf: D, Damasio H ကို, အ insula မှ Bechara အေပျက်စီးခြင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်စွဲ disrupts ။ သိပ္ပံ။ 2007; 315: 531-534 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
50 ။ Wang P၊ Lu L၊ ရှီဂျေမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အချက်များသည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုပိုမိုဆိုးဝါးစေပြီးမတူညီသောရှောင်ကြဉ်သည့်အချိန်ကာလများတွင်ဘိန်းဖြူစွဲသူများ၏စွဲလမ်းမှုကိုတိုးမြှင့်စေသည်။ စိတ်ပညာ။ 2012; 221: 701-708 ။ [PubMed] •ဤဆောင်းပါးသည်ဘိန်းဖြူမှီခိုနေရသည့်မူးယစ်ဆေးစွဲသူများ၏မူးယစ်ဆေးဝါးအပေါ်စွဲလမ်းမှုတိုးပွားလာခြင်းကိုအိုင်အိုဝါလောင်းကစားလုပ်ငန်းမှဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
51. Paulus အမတ်။ စိတ်ရောဂါကုသမှုတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကမောက်ကမဖြစ်မှု: homeostatic processing ပြောင်းလဲ? သိပ္ပံ 2007; 318: 602-606 ။ [PubMed]
52 ။ ကိုကင်းဓာတ်ပြုသူအမျိုးသမီးများသည်ကိုကင်းများထိတွေ့မှုကြောင့် ဦး နှောက်၏“ ထိန်းချုပ်သည့်ကွန်ယက်များ” တွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုလျော့နည်းသွားခြင်းကြောင့် Volkow ND၊ Tomasi D၊ Wang GJ၊ Fowler JS, Telang F၊ Goldstein RZ၊ Alia-Klein N၊ PlosOne ။ 2011;6(2): e16573 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed] •ကိုကာကိုလာနှင့်ထိတွေ့ပါက၊ ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားပြုသူအမျိုးသမီးများသည်အပေါ်မှအောက်ထိန်းချုပ်မှုကွန်ရက်၏အစိတ်အပိုင်းများတွင်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုလျော့နည်းကြောင်းပြသခဲ့သည်။
53. Wilcox CE, Teshiba TM, Merideth F, Ling J, Mayer AR ။ ကိုကင်းသုံးစွဲမှုဆိုင်ရာရောဂါများတွင် cue ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့် front-striatal လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာဆက်သွယ်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ မူးယစ်ဆေးနှင့်အရက်မှီခို။ 2011; 115 (1-2): 137-144 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
54. Chase HW, Eickhoff SB, Laird AR, Hogarth L. မူးယစ်ဆေးဝါးလှုံ့ဆော်မှုအပြောင်းအလဲနှင့်တဏှာ၏အာရုံကြောအခြေခံ: တစ်ခုက activation ဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်း Meta-analysis သည်။ ဇီဝစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 ခုနှစ်; 70 (8): 785-793 ။ [PubMed]
55. Dias-Ferreira E, Sousa JC, Melo I, Morgado P, Mesquita AR, Cerqueira JJ, Costa RM, Sousa N. နာတာရှည်စိတ်ဖိစီးမှုသည် frontostriatal ကိုပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိသည်။ သိပ္ပံ 2009; 325: 621-615 ။ [PubMed]
56. Goldstein RZ, Craig အေဒီ၊ Bechara A၊ Garavan H, Childress AR, Paulus အမတ်များစသည်။ မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ချို့ယွင်းထိုးထွင်းသိမြင်မှု၏ Neurocircuitry ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Cogn သိပ္ပံ။ 2009; 13: 372-80 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
57. SAMHSA ။ ၂၀၀၆ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအမျိုးသားစစ်တမ်းမှရလဒ် - အမျိုးသားတွေ့ရှိချက်များ။ အသုံးချလေ့လာရေးရုံး၊ 2006 NSDUH စီးရီး H-2007, DHHS ထုတ်ဝေမှုအမှတ် SMA 32-07 ။
58. Moeller SJ, Maloney T, Parvaz MA, Alia-Klein N, Woicik PA, Telang F, Wang GJ, Volkow ND, Goldstein RZ ။ ကိုကင်းစွဲလမ်းမှုအပေါ်အမြင်အာရုံချို့ယွင်းချက် - ကိုကင်းရှာဖွေသည့်အပြုအမူအပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းအထောက်အထားနှင့်သက်ရောက်မှုများ။ ဦး နှောက်။ 2010; 133: 1484-1493 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
59. Le Berre AP, Pinon K, Vabret F, Pitel AL, Allain P, Eustache F, Beaunieux အိပ်ချ်။ နာတာရှည်အရက်သေစာခံစားနေရသောလူနာများအတွက်ခံစားချက် - သိရှိထားသည့်မှတ်ဥာဏ်ဆိုင်ရာမှတ်ဥာဏ်လုပ်ငန်းကိုအသုံးပြုသည်။ အရက် Clin Exp Res ။ 2010; 34: 1888-1898 ။ [PubMed]
60. Chiu PH, Lohrenz TM, Montague PR ဆေးလိပ်သောက်သူများ၏ ဦး နှောက်သည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းတစ်ခုတွင်အမှားအယွင်းကင်းသောအချက်ပြမှုကိုတွက်ချက်သော်လည်းလျစ်လျူရှုသည်။ နတ်နေရာသစ်။ 2008; 11: 514-20 ။ [PubMed]
61 ပေးဆောင် DE, Lieberman MD, လန်ဒန် ED ။ methamphetamine မှီခိုမှုအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ကျူးကျော်၏အာရုံကြောဆက်စပ်မှု။ Arch ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011 ခုနှစ်; 68: 271-282 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
၆၂။ Hester R၊ Nestor L၊ Garavan အိပ်ချ်။ ချို့ယွင်းသောဆေးခြောက်သုံးစွဲသူများတွင်အမှားအသိအမြင်နှင့်ရှေ့ cingulate cortex hypoactivity အားနည်းချက်။ Neuropsychopharmocol ။ 62; 2009: 34-2450 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
63 ။ Brever D, Cleeremans A, Bechara A, Greisen M, Kornreich C, Verbanck P, Noel X ။ J ကိုလောင်းကစားလုံး။ 2013 doi:10.007/s10899-012-9348-3. [PubMed] •ဤဆောင်းပါးသည်ပြသနာများသောလောင်းကစားသူများသည်လောင်းကစားမဟုတ်သောအလုပ်တွင်သူတို့၏ metacognitive စွမ်းရည်ကိုအားနည်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
64. Jung JG၊ Kim JS၊ Kim GJ, Oh MK, Kim SS ။ ကိုရီးယားအရက်မှီခိုသူအမျိုးသားများသည်အရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း၌အရက်သမားများထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်း၏အခန်းကဏ္။ ။ J ကိုကိုရီးယား Med သိပ္ပံ။ 2011; 22: 132-7 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
65. နယ်လ်ဆင် TO၊ Narens L. Metamemory: သီအိုရီဆိုင်ရာမူဘောင်နှင့်တွေ့ရှိချက်အသစ်များ။ စိတ်ဓာတ်သင်ယူပါ။ 1990; 26: 125-173 ။
66. Fleming က SM, Dolan RJ ။ metacognitive စွမ်းရည်၏အာရုံကြောအခြေခံ။ Philos Trans R ကို Soc Lond B Biol သိပ္ပံ။ 2012; 367: 1338-1349 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
67 ။ Craig အေဒီ။ ဘယ်လိုခံစားရလဲ? Interoception: ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မအခွအေနေ၏အသိ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2002; 3: 655-666 ။ [PubMed]
68. Verdejo-Garcia A, Bechara A. စွဲလမ်းမှု၏တစ် ဦး က somatic အမှတ်အသားသီအိုရီ။ Neuropharmacology ။ 2009; 56: 48-62 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုမမှန်များ၏ pathophysiology နှင့်ကုသမှုကိုနားလည်ရန် Barr က MS, Fitzgerald PB, Farzan က F, ဂျော့ခ်ျ TP, Daskalakis ဂျေ Transcranial သံလိုက်ဆွ။ Curr မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု Rev. 69; 2008: 1-328 ။ [PubMed]
70 ။ Mishra BR, Nizamie SH, Das B, Praharaj SK ။ အရက်မှီခိုအတွက်ထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက်ဆွ၏ထိရောက်မှု: အတုအယောင် -controlled လေ့လာမှု။ စွဲ။ 2010; 105: 49-55 ။ [PubMed] •ဒီလေ့လာမှုကိုမှန်ကန် dorsolateral Pre- တိုကျရိုကျမြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းထပ်တလဲလဲ transcranial သံလိုက် stimulation အရက်မှီခိုအတွက်သိသာထင်ရှားသော anticraving သက်ရောက်မှုရှိသည်ပြသခဲ့သည်။
၇၁။ Naqvi NH, Bechara အေ။ အရက်သေစာနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှု - အပျော်အပါး၊ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကိုလက်ခံသည်။ ဦး နှောက် Struct Funct ။ 71; 2010: 214-435 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]